Paranormal Archives - Shwe Khit Online TV
October 16, 2021 Shwe Khit Online TV 0
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ရွှေခေတ်ပရိသတ်ကြီးတွေကို ကမ္ဘာပေါ်က ထူးဆန်းလှတဲ့ နာမည်ကျော်ကျောက်မျက်ရတနာတွေရဲ့အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်တယ်ဆိုတာကတော့ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ နာမည်ကျော်ကြားထက် မကောင်းတဲ့ဘက််မှာ နာမည်ကျော်ကြားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ဘယ်လိုကျောက်မျက်ရတနာတွေက ဘယ်လိုမကောင်းတဲ့အချက်တွေကြောင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရသလဲဆိုတာ ဒီစာလေးကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် … shwekhitonlinetv.com ၁။ The Sancy Diamond The Sancy Diamond ဆိုတဲ့ စိန်ကြီးဟာ အရောင်တလက်လက်ဝင်းမွတ်လှပသလို ကြောက်မက်ဖွယ် ကျိန်စာသင့်စိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိန်ကြီးဟာအိန္ဒိယက အခိုးခံခဲ့ရပြီး ပြင်သစ်နဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘုရင်တွေလက်ထဲ […]
သင့်အိမ်မှာ ခြောက်လှန့်တတ်တဲ့ အရာတစ်ခုခု ရှိနေကြောင်း ပြသနေတဲ့ အချက်များ
June 9, 2021 Bo Bo 0
သင့်အနေနဲ့ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေရင်းနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုမျိုး ခံစားရဖူးပါသလား ? တစ်ကယ်လို့ ခံစားရဖူးတယ်ဆိုရင်ကော ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မွလို့ သင့်အနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ ? shwekhitonlinetv.com အမေရိကန်နိုင်ငံက သရဲတစ္ဆေနဲ့ လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကို စူးစမ်းလေ့လာရှာဖွေနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ လူ (၁၀) ယောက်မှာ (၆) ယောက်က သရဲတစ္ဆေတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ လေ့လာစူးစမ်း သုတေသနပြုမှု မှတ်တမ်းတွေအရ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ခြောက်လှန့်တက်တဲ့ သရဲတစ္ဆေကဲ့သို့ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေမယ်ဆိုရင် သိသာစေမယ့် အချက်လေးတစ်ချို့ကို […]
မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များ
September 11, 2020 Yan 0
Shwe Khit ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ မထင်မှတ်ပဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင် သမိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အမွေနှစ်တွေလည်း ပါဝင်သလို တစ်ခြားသော ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတွေလည်း ပါဝင်တာမို့လို့ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com ၁။ ဧရာမ အမွှေးရှည် ဆင်ခေါင်းကြီး James Bristle နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတို့ဟာ လယ်လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့အတွက် မြေကြီးကို […]
August 18, 2020 Bo Bo 0
ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာ မကောင်းဆိုးဝါး နာနာဘာဝတွေ၊ ပရလောကသားတွေနေနဲ့ အပြင်လောကမှာ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်တဲ့ သူတွေရှိကြလားမသိဘူးရှင့်။ shwekhitonlinetv.com ဘာလို့ အခုလိုမေးရသလဲဆိုတော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာက မကောင်းဆိုးဝါးတွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုမို့လို့ပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ဒါက တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူအတော်များများက ဒီဖြစ်ရပ်ကို ဖြစ်ရပ်မှန်အနေနဲ့ လက်ခံထားကြတယ်ဆိုပေမယ့် ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေကိုတော့ မိမိ ဦးနှောက်နဲ့သာ စဥ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ယုံသင့်မယုံသင့် ကို ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။ ကဲ ဒါဆိုရင်အကြောင်းအရာလေးကို […]
ယနေ့တိုင် ခြောက်လှန့်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသရဲများ
အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှုတွေများပြားပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လည်း ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အယူအဆေတြ ဆင်တူတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကေတာ့ အပြင်မှာတကယ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ခြောက်လှန့်တက်တယ်ဆိုတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက သရဲတစ်ဆေတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ပါဦးနော် . ။ shwekhitonlinetv.com ၁။ Krasue Krasue ဆိုတာကေတာ့ မီးလောင်တိုက်သွင်းခံရပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ မိန်းမချောတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ အမြဲတမ်းဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပြီး စားသောက်ဖို့ အသွေးအသာတွေကို ညအခါမှာရှာဖွေဖို့ ထွက်လာလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပုံသဏ္႑ာန်ကို အမျိုးမျိုးဖော်ပြကြပေမယ့် အများစုမှာတော့ ဦးခေါင်းချည်းသက်သက်လေထဲလွင့်မျောနေပြီး […]
လုပ်ဇာတ်မဟုတ်ဘဲတစ်ကယ်ရှိတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အဖြစ်အပျက်များ
July 9, 2020 Bo Bo 0
ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေကို ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ ကမ်ဘာပေါ်ကနေရာလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက လုပ်ဇာတ်မဟုတ်ဘဲ တစ်ကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တွေလဲ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com (၁) Arizona Lost Dutchmans Gold Mine (၁၈၀၀) ခုနှစ်တွေလောက်တုန်းက တစ်ကယ်ရှိခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ ပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ ယူဆထားတဲ့ Jacob Waltz ရွှေမိုင်းတွင်းကြီးကို ရှာဖို့ လာရောက်ကြတဲ့လူတော်တော်များများဟာ သေဆုံးခြင်းကိုပဲ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ့လိုသွားရှာကြတဲ့လူတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို ပြန်လည်တွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့ သူတို့ဟာ ဦးခေါင်းတွေမရှိတော့ပါဘူး။ […]
ဖော်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဝှက်စာများ
June 1, 2020 Bo Bo 0
စုံထောက်ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ရှုလေ့ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဝှက်စာ ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ဟာ အဆန်းတကြယ်ဖြစ်နေမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ကြရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကို မပေါက်ကြားစေဖို့ ဝှက်စာတွေကို အသုံးပြုခဲ့တာက ဟိုးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဝှက်စာတွေကို အသုံးပြုခဲ့ရာမှာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပြီး အချို့ဝှက်စာတွေကတော့ ဖော်ထုတ်ဖို့ လွယ်ကူပေမယ့် အချို့သော ဝှက်စာတွေကတော့ ယနေ့ချိန်ထိဖော်ထုတ်လို့ မရနိုင်အောင် လျှို့ဝှက်နက်နဲလှပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ သမိုင်းအဆက်ဆက်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် ဝှက်စာ (၁၀) ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com […]
April 20, 2020 Yan 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Shwe Khitt ပရိသတ်ကြီးအတွက် ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ နေရာတွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ ပဟေဠိဆန်ဆန် တည်ရှိနေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ….. shwekhitonlinetv.com Nazca Lines ကမ္ဘာပေါ်မှာ အထူးဆန်းဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်ခုကို ညွှန်ပြပါဆိုရင် Naza Lines တွေကို ကြည့်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးမိမှာပါ။ ပီရူးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဒီ Nazca Lines တွေဟာ သက်တမ်းအားဖြင့် AD 400 ကနေ 650 သက်တမ်းရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ […]
ခဏခဏ မိုးကြိုးပစ်ခံရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက် အကြောင်း
April 16, 2020 Yan 0
ဒီတစ်ခေါက်မှာ Shwe Khit ပရိသတ်ကြီးကို ထူးဆန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာထက် တော်တော်လေးကို ကံဆိုးတဲ့လူသားလို့ အမည်ပေးရင် ပိုပြီး လိုက်ဖက်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မသေခင်မှာ မိုးကြိုး ခဏခဏ အပစ်ခံရပြီး သေသွားတာတောင် သူ့အုတ်ဂူကို မိုးကြိူးအပစ်ခံရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ဗဟုသုတရစေရန်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်… shwekhitonlinetv.com သူရဲ့နာမည်ကတော့ Major Walter Summerford ဖြစ်ပြီး ပထမ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ […]
တစ်ကယ့် အပြင်လောကရဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး သရဲခြောက်တဲ့ အိမ် ( ၁၀ ) အကြောင်း
March 23, 2020 Wai Phyo Oo 0
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ … သရဲခြောက်ခံရတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း တစ်သက်မှာတစ်ခါတော့ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် ..။ တစ်ချို့က အသံပေးပြီးခြောက်တာ ခံရသလို ၊ တစ်ချို့ကတော့ မျက်ဝါးထင်ထင် အခြောက်ခံကြရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သရဲခြောက်တာကို သိရတာနဲ့တင် ကျောချမ်းစရာကောင်းနေပါပြီနော်..။ ဒါဆိုရင် အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ‌နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး သရဲခြောက်တယ်ဆိုပြီး စာရင်းပြုစုထားတဲ့ အိမ် ( ၁၀ ) အိမ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင် …။ shwekhitonlinetv.com ၁၀။ Myrtles […]
အသက်ဘေးနဲ့ တည့်တည့်ကြီးကို တိုးပြီး ရင်ဆိုင်သွားမိကြသူများ